Iyiphi indlela yenkululeko? | Kusuka kuLinux
Iyiphi indlela yenkululeko?
UTina Toledo | | I-GNU / Linux, Okunye
"Konke ukulahlwa yicala yijele": Friedrich Nietzsche
Esikhathini esingaphansi kwenyanga edlule, uzakwethu nano ubhale i- isihloko sokuhlela lapho eveze umbono wakhe ngecala elithile lomsebenzisi, elaziwa njenge Umcibisheli, ukuthi wayeka ukusetshenziswa kwesoftware yamahhala futhi, ngenxa yalokho, "inkululeko" yakhe. Isizathu umsebenzisi asisebenzisayo, futhi lokho kungaphansi kwephuzu lakhe, lokho kungukuthi emhlabeni I-GNU / Linux inkululeko ibe yisithiyo esikhulu kunethuluzi elisetshenziswe kahle ukufeza inqubekela phambili ebonakalayo. Iqiniso lokuthi ngemuva kokuhlubuka kwakhe unquma ukusebenzisa IMacOSX o Windows akubalulekile, iphuzu ukuthi Kungani umsebenzisi oshisekayo weLinux agcina ecasukile aze afike endaweni yokuyeka ukusetshenziswa kwakhe, futhi, ngaphezu kwalokho, ibhulogi enikezelwe ezihlokweni ze-GNU / Linux, phakathi kwezinye izinto?
Akuyona inhloso yami ukubethela Umcibisheli ngesinqumo sakho, ngicabanga nano Sele ikwenzile lokhu ngempumelelo enkulu, kepha ngizozama ukukucabangisisa ngakho. Izikhathi eziningi ngike ngaphawula ukuthi kunzima kimi ukuqonda ukuthi hlobo luni lwenkululeko okukhulunywa ngalo emhlabeni I-GNU / Linux, futhi akusiwo umbuzo wokuchazelwa kimi ngenkululeko yokusebenzisa, ukuguqula nokusabalalisa isoftware yamahhala ngoba ngiyayiqonda kahle.
Ngihlanganyela no Umcibisheli umqondo wokuthi inkululeko edukile ayiholeli ndawo, noma ngabe leyo nkululeko ingeyenhloso enhle kunazo zonke, ngoba inkinga enkulu, ukuqala, Ngaphakathi kwalolu hlaka lwenkululeko, sizokuhlonipha kanjani ukwehluka kwethu?; futhi na ngaphezulu Sizobaxhumanisa kanjani ukuze, naphezu kwalokhu kwehluka, sikwazi ukwakha indlela efanayo?
Into yokuqala ebonakala kimi ukuthi iyaqondakala yileyo esiyisebenzisayo Linux Sikwenza ngezizathu ezahlukahlukene: kukhona labo abasebenzisela ifilosofi; abanye ngenxa yokukhululeka kwayo futhi abanye ngenxa nje yokuthi siyayithanda. Futhi ngamunye wethu, njengomsebenzisi, unokulindela okuhluke kakhulu kunalokho esikulindele Linux njengethuluzi noma ngabe elenzelwe umsebenzi noma elijabulisayo futhi silivumelanisa nalokho esikuthandayo namathuba amakhono ethu obuchwepheshe.
1 Inkululeko… ifana nentuthuko enkulu?
2 Inkululeko… ifana nokuqonda okukhulu?
Inkululeko… ifana nentuthuko enkulu?
Ngokwethiyori, indawo yenkululeko kufanele ibe yisisekelo sobuhlakani, futhi ezimweni eziningi, kodwa-ke, inkululeko nje ayanele ukuthi yonke le ntuthuko ibe nesiphetho esihle ... ngalokho, kudingeka izinsiza zabantu nezezezimali.
Ngazi kuphela izindlela ezintathu zokuthola imali yokuxhasa iphrojekthi: ukutshala imali yakho; ngokusebenzisa imali yesikhungo kanye neminikelo yabasebenzisi. Okumbili kokuqala kuyinkimbinkimbi, ngoba noma ngubani otshala imali eningi wenza kanjalo ngenhloso yokuthi okungenani athole imali oyitshalile, masingakhulumi ngenzuzo. Inketho yesithathu incike ekuthandeni okuhle kwabasebenzisi, kepha Abasebenzisi beLinux bazimisele kangakanani ukukhokhela isoftware yamahhala uma bephoqelekile?
Yebo, ukuthola impendulo ecatshangelwayo kungaba kuhle ukubona ukuzivocavoca kwenziwa kubhulogi elingumngane I-Linux kakhulu: Ipholi: Ungakhokha ukusebenzisa i-GNU / Linux? isiphetho sayo sithi Khokha ukusebenzisa i-GNU / Linux? Kuzoba ukuthi cha ....
Kuyo singafunda izizathu eziningi zokuthi kungani abasebenzisi abanjalo bengeke bazimisele ukukhokha ukusebenzisa isoftware yamahhala, iningi labo elisuselwa kwinkululeko engaqondakali. Yilapho inkululeko igcina ivimbela ukuthuthukiswa kwesoftware yamahhala yokuncintisana ngoba ibhekene nenkululeko yokuba nenketho yokukhokha noma yokungakhokhi… iningi elikhulu likhetha ukungakhokhi.
Inkululeko… ifana nokuqonda okukhulu?
Lokhu akusebenzanga futhi njengoba le nkululeko ingekho enkonzweni ukuhlukanisa ukuqondana kwalabo abacabanga ngokwehlukile, kepha ukusinika umsebenzi onenkani wokukhomba ukungafani kwethu nokugcwala kwezikhalazo. Akuhlanganisi, kuyahlukana. Kusebenza ngisho nokuyekisa iziphakamiso ezinhle kuphela ngemvelaphi yazo.
Namuhla ekuseni U-Elav futhi ngiphawule ngomusho osuka ku USteve Wozniak okusho, ngokujwayelekile, okuveza ukuthi into embi kakhulu engaba khona ekudaleni yikomidi. Kuyathakazelisa ukuthi ifana kakhulu nokuma kwe- UMark Shuttleworth kanye nalo "Akuyona intando yeningi lena". Noma ngubani oke wazama ukuthuthukisa umbono kanye / noma iphrojekthi lapho abantu abayikhulu abahlukene becabanga ngakho bazokwazi ukuthi ngikhuluma ngani: wonke umuntu ukholelwa ukuthi balungile futhi wonke umuntu ufuna ukubeka ukuthi lo mbono uwumkhuba noma cha ... Okwamanje ukwakhiwa kwesoftware okungaba yisiqalo, njenge I-Gimp o I-Inkscape, bahlala bevalelwe ngoba akekho umuntu ofuna ukuvumela noma okungenani aqonde ukuthi yini abadwebi bezithombe abadinga ngempela.
Ngokwami, angikwazi ukushaya ihlombe, ingasaphathwa eyokuthi inkululeko yinhle lapho kuncishiswe inkululeko enkulu: leyo yokuba. Akukho simiso senkululeko esisinikeza ilungelo lokugxeka labo abasebenzisa futhi bayeke ukusebenzisa Linux. Wonke umuntu ukhululekile ukwenza isinqumo esivumelana nabo kakhulu. Kepha okubi kakhulu ukuthi nabasebenzisi abafanayo be- Linux kube nomehluko phakathi kwabo: lezo ze Unity ngokumelene nalabo I-Cinnamon… Nasemuva; lezo ze I-GNOME ngokumelene nalabo KDE… Nasemuva; lezo ze I-Banshee ngokumelene nalabo Clementine… Nasemuva.
Futhi ngiyavumelana nawe umnsalo; kugcina kukhathele.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Iyiphi indlela yenkululeko?
I-Bravo yakho, lo mbhalo ungcono kakhulu engiwufunde ezinyangeni.
Ngivumelana nawe, bheka, ngisebenzisa iLinuxMint ngoba ngiyayithanda, i-distro, ukupakisha, nomsebenzi wobuciko, ngisho nemibono kaClem engiyithandayo nayo yonke imizamo yakhe. Futhi ngisebenzisa iGnome engxenyeni eyodwa kwezintathu ezifanayo.
Kepha ngakolunye uhlangothi ngisebenzisa i-Opera ngendlela efanayo nomunye umuntu esebenzisa iMac, okungukuthi, angikwazi ukugxeka ngokusebenzisa uhlelo lobunikazi lapho ngisebenzisa isoftware yokuphathelene. Futhi anginandaba, ngisebenzisa isoftware ehlangabezana kangcono nezidingo zami. Ngiphinde ngibe ngumsebenzisi weWindows (imidlalo kuphela kodwa nginguye) futhi ngidlala iBattlefield 3 yasekuqaleni futhi angikhathazeki ngokuziphatha lapho ngisebenzisa isoftware ephathelene.
Futhi angikaze ngigxeke i-KDE, noma Ubuntu noma yini, konke kubonakala kukuhle kimi, uma kunezinketho okufanele zisetshenziswe, futhi ukuthuthukiswa kwe-LM kuncike ku-Ubuntu, ngakho-ke ngiyavumelana futhi abasebenzisi abaningi banabo Ubuntu, kungcono kimi. Ngisebenzisa ngempela iLinux ngoba kimi iyona esebenza kakhulu, futhi futhi ngithandana ne-console (hehe), ithuluzi elinamandla kunawo wonke ku-OS yami.
Vumelana ngokuphelele nawe.
Ayikho inkululeko, kepha ukufuna inkululeko, futhi lokho kusesha yikho okusenza sikhululeke.
Kepha ukusesha kusihlanganisa namaketanga okungahambisani
Ngicabanga ukuthi i-GNU / Linux iba yisifaniso se-cosmic entropy noma yokuvela kwezinto eziphilayo. Ngaphansi kwalesi sibhengezo, abasebenzisi bezimo ezahlukahlukene kakhulu baqoqiwe, ngamunye enendlela yakhe, enezintshisakalo zakhe ... Futhi ngicabanga ukuthi leyo yinto enhle impela ngalo mhlaba. I-Linux ayifuni ukulawula imakethe noma ukufaka esikhundleni seWindows; iqukethe ukuba yiLinux, ngendlela yayo, namandla nobuthakathaka bayo. Kuyiqiniso ukuthi i-Gimp, ngokwesibonelo, ingahle ingaqhathaniswa ne-Photoshop futhi yingakho abaklami abaningi bengayithathi ngokungathi sína, kepha kusewuhlelo olukhulu oluzokwanelisa izidingo zabaningi; lokhu kungaphezu kokwanele.
Angicabangi ukuthi kunesidingo sangempela sokuthi bonke abasebenzisi beLinux bavumelane futhi bahambe ngendlela efanayo; lokho kungaba yisicefe kakhulu futhi kungahambisani nesimo sobuntu. Ngokuqondene nebhizinisi lama-troll, mina uqobo angibanaki. Kuyadabukisa kakhulu ukuthi kunabasebenzisi abazinikele ekugxekeni abanye abantu ngokuba nezintandokazi ezahlukahlukene, futhi ngidlula ngokwazi lapho ngibona izindaba ezimnandi ezithanda lolu hlobo lwengxoxo (eMuyLinux yisinkwa sansuku zonke, okungukuthi). Uma omunye umuntu ethanda iGnome, KDE noma ebeka iWindows logo ngemuva ... ilungele yena, futhi iyafana nanoma yiluphi olunye uhlobo lokuzikhethela. Unelungelo lokuvikela ngisho nokungaqondakali, futhi ukushumayela ivangeli akukaze kube umkhuba oncomekayo.
Kepha ngaphandle kwezinkinga ozibize kule ndatshana, ngiyangabaza ukuthi iLinux izongikhathala. Ngimthande kakhulu, nge-Arch ngidale uhlelo ngomfanekiso wami nangokubukeka kwami, ngokuya ngezidingo zami ... Kodwa-ke, ekugcineni singasho, ngomqondo wefilosofi, ukuthi imvelaphi ye-GNU / Linux Izinkinga azikho empeleni, i-GNU / Linux, kepha ngumuntu kanye nokwehluleka kwakhe ngokuphelele ukuziphatha ngendlela enengqondo. Isimo sethu sobudlelwano sivame ukusenza sikholelwe ukuthi iqembu lingcono, ukuthi ubumbano luyancomeka ... kepha ubumbano nobumbano, kwesinye isikhathi, kudinga ukuzidela komuntu ngamunye, umbuzo kimi oza kuqala.
Ngaphandle kokungena ezindleleni zefilosofi, ezingahambisani, nokuthi iyiphi inkululeko (noma kunalokho, ukusebenzisa igama elivela kuSchopennhaüer, "umuzwa wenkululeko"), kwanele ukusho ukuthi, njengoba uPandev92 esho, echaza kahle uCarlos Fuentes , inkululeko uqobo ayikho. Umuntu ulahleka kusukela ekuzalweni, ngoba, njengenhlangano yezenhlalo, kufanele anikele, noma anikeze, ingxenye yenkululeko yakhe emphakathini, ukuze ibeke imithetho emvumela ukuthi aphile emphakathini. Ngakho-ke, akekho umuntu okhululekile ukwenza lokho akufunayo, i-ergo, inkululeko ayikho ngaphandle kokucatshangelwa, njengosesho esinenkululeko yokwenza noma cha.
Ku-Linux, le nkululeko, njengomqondo futhi ngokombono wami, ihlobene, ngaphandle kokukhetha amathuluzi noma ama-desktops noma ukusatshalaliswa, ngokulawula (ngezinga elikhulu noma elincane) okutholakala ngaphezu kwethuluzi (i-PC) lelo Namuhla, kubalulekile futhi kuyisisekelo kwabaningi bethu (kuyithuluzi lomsebenzi, indawo yokuzilibazisa, indawo yokudalwa nokukhuthazwa, izindlela zokuxhumana, iwindi lomhlaba, njll.) Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwalo kuyingxenye ebalulekile yezimpilo zethu. Ngisebenzisa iLinux ngoba ngifuna ukulawula ngokuphelele ngangokunokwenzeka (futhi lokho kulawula kungumuzwa wami wenkululeko) izici zempilo yami engingakhetha kuzo, ukuthi lokho okungekho ezandleni ezimsulwa zesiphetho, kusezimayini.
Futhi lokho ngikuchazile ekuphawuleni kwaleyo ndatshana ... sengivele ngathi angiyena ozobethela noma ngubani ngokushiya i-GNU / Linux, ukuthi ukungakhululeki kwami ​​okukhulu nokungavumelani ngokuphelele kuphawula uhlelo ngalunye njengo "kusebenza okuthile kuphela" ukusho ukuthi iLinux izofunda kuphela, ukuthi iWindows izodlala ne-Mac ukuklama nokunye ...
Njengomuntu osekela inkululeko, akungikhathazi ukuthi wonke umuntu usebenzisa noma yini inqobo nje uma eyithanda, kepha ukwenza ngokujwayelekile ngokuthi abantu abasebenzisa iMac noma iWindows "bayazi" bayayilahla inkululeko yabo, akeze, bambalwa abakwaziyo ukuthi bangaba nayo noma okungenani babe nokuthile okufana nokuthi lezo zinhlelo azizisebenzisi ngoba zifuna kodwa ngoba ziyazi.
Ngiyaphinda ngithi, wonke umuntu empeleni ungumnikazi wakhe futhi uyazi ukuthi enzeni, u-Archer angasebenzisa futhi angasebenzisi. Kepha angikwazi ukunikeza ukwesekwa kwami ​​kulokhu okungenhla, ngiyaxolisa ... Kodwa-ke, ungangibizi ngomenzi wesahlulelo noma ngokufaka imibuzo.
Isoftware yamahhala isinikeza inkululeko (sonke esiyaziyo) kepha abanye basebenzisa isoftware yamahhala ukwenza noma yini abayifunayo ngaphandle kokubheka abanye. Ngemuva kwalokho kuvela isoftware ye-libertine, umkhiqizo okhubaza amaphrojekthi bese uwaqeda. Kwesinye isikhathi umphumela wayo uyinhlekelele kangangokuba ulimaza amaphrojekthi avela eceleni.
Kepha kunamaphrojekthi acocekile futhi asebenza kahle asekela umthombo ovulekile. Ngokubona kwami, lawa maphrojekthi anomholi oyedwa noma ngaphezulu ohambisa umsebenzi womphakathi. Iphrojekthi engenabaholi yinkukhu engenakhanda (futhi sonke siyazi ukuthi kwenzekani kulezo zinkukhu).
+1 yingakho uMint enza kahle kakhulu, ngoba uClem uyazi ukuthi angayisebenzisa kanjani imibono yakhe, aqondise futhi alalele ngasikhathi sinye.
Isiphakamiso sombhali sithakazelisa kakhulu. Ngingasho ukuthi uzibhale ngendlela ecishe ifinyeleleke izinkinga ezibhekene nesoftware yamahhala.
Ukuhlukaniswa, abasebenzisi abaningi abakubona kuyinto enhle, kuyinkinga. Amaphrojekthi amaningi amahle abona ukukhanya kosuku futhi ngokushesha abulawe yindlala. Incazelo enikezwe ngalokhu ukuthi, uma ingavusanga intshisekelo emphakathini, iphrojekthi ayisebenzi. Ngicabanga ukuthi impendulo engeyinhle.
Imiklamo eminingi emihle imile, noma iqhubekela phambili ngokudabukisayo ngenxa yokuntuleka kokwesekwa kanye nokuhanjiswa okungafanele kwemizamo yomphakathi.
Isixazululo asilula, kepha impendulo kule nkinga ukuthi isoftware yamahhala ekugcineni iyanqoba noma iyabhubha, ebaluleke njenge-utopia.
I-Linux inkululeko ngokwemvelo. Ikunikeza amathuluzi futhi ikwenze kube lula kuwe ukuthi uhambe lapho ufuna khona futhi kuphi. Kepha enye into ngamaphrojekthi kakhonkolo, lapho kufanele ugxile ekugxileni ngokuya ngezinhloso ezibekiwe. Lapha siba nezithelo kuphela lapho umhlanganyeli ngamunye ecacile mayelana nokuzinikela kwakhe (kanye nokwabanye) ngaphakathi kwephrojekthi, kudingekile ukunciphisa ukuphazanyiswa kwangaphandle ngaphandle kwalesi sisho esivimbela inkululeko yanoma ngubani.
KuLinux uhamba njengenja ngaphandle kweketanga. Nge-Microsoft ne-Apple, inja ingahle ilungiswe kahle, kepha ihlala ikuchungechunge.
Ngiqale eLinux ngibonga Ubuntu, okungukuthi, okwamanje lapho iLinux iyeke ukuba yinto engachazeki futhi eyinkimbinkimbi kimi. Namuhla anginalo ulwazi olukhulu abathi umsebenzisi weLinux kufanele abe nalo. Ngimane ngazivumelanisa nokusebenzisa iLinux nokuxazulula izinkinga okungenzeka zavela. Kungabi ngaphezulu noma ngaphansi kwe-Windows, kuphela lapho ... kungaba bazixazulule noma ngazifinya.
Ukubukeza i-athikili kaTina, nokungibukeza, ngisebenzisa i-gnu / linux ngoba ngifunda kangcono ukuthi izinto zisebenza kanjani engizisebenzisa ohlelweni olusebenzayo, ngoba ngiyayithanda (yize ungathola impunga eluhlaza lapho izinto zingasebenzi), kodwa ngaphezulu konke ngoba ngithanda umuzwa womphakathi: ukuthi uma usesha uzoba nempendulo, nokuningi uma kukhona uhambo lokubuya nomunye umuntu ukuxazulula okuthile, noma ukucabanga ngephrojekthi. Kukhuthaza ubumbano, ubuzalwane (kwesinye isikhathi ukuncintisana, kuphela uma uqondiswa yilobu buphukuphuku bokufaneleka nentuthuko ekhona kweminye imiphakathi), futhi yebo ... kimi kubalulekile ukuthi amathuluzi amahhala, futhi ngenxa yesizathu kuphela inkokhelo kungaba ukuxhaswa okuqukethe leyo software, noma uma unjiniyela ecela iminikelo ngentando ukuze aqhubeke, noma uma ehweba ngomsebenzi wakhe ngezindleko eziphansi ngenhlalo, HHAYI ngezinjongo zokuhweba. Yize inkululeko engu-4 ibamba umqondo wezinhlelo zezentengiselwano nezebhizinisi (uStallman akayona i-Zen guru, uyayithanda imali, okuwukuphela kwento ayigxekayo ukuthi ngabe into imahhala noma cha, kwesinye isikhathi enzima), angiboni ngaleyo ndlela, ngoba i-gnu / linux ingeyabantu abasebenzayo, hhayi izinkampani, yingakho imibono eminingi yebhizinisi iya esihogweni, ngoba kunenqwaba yabasebenzisi (abaningi ngokungazi) abangahambi nalolo daba lomthengi . Ngiyavuma ukuthi ziya ngokwanda izisekelo, imifelandawonye yezabasebenzi kanye nomnotho wezenhlalo ovela kusoftware yamahhala, kunokubuswa ngabathile. I-GNU / linux yindlela i-inthanethi eyake yaba ngayo: ipharadesi lenkululeko, noma njengoba abanye besho, belifuna. Ifilosofi yesoftware yamahhala ayihlaseli impahla yangasese, futhi ngicabanga ukuthi kufanele. Kepha-ke, lelo ngumbono wami ngale ndaba, futhi ngiyayihlonipha eminye imibono yeqiniso.
Noma ngingalithandi igama engizolisho manje, ngaphandle kokungabaza kuliqiniso ... «lokhu okubhalile, kungenze ngaba bonisa ngezinto ezahlukahlukene »
Ngikuhlelile lokhu okuthunyelwe ngakufaka esigabeni se- «Kunconyiwe», kuncane okukufanele 🙂
Ubekhunjulwa ukukufunda, okuthunyelwe kwakho kungenye yezinto ezinhle kakhulu esinazo 😀
Mayelana nokuthunyelwe, ngabelana ngamaphuzu akho ambalwa. Isibonelo… uma ngicabanga ukuthi i-X software yinhle, iyakhazimula, uma ibiza u- $ 15 futhi ngicabanga ukuthi kuyifanele, ngaphandle kokungabaza ngiyayikhokhela ukusebenzisa le software. Manje, lokho kwezomnotho angikwazi (ukukukholwa noma cha ...) kungenye into, okusho ukuthi, uma bengingayikhokha bengingayikhokha. Ungayi ekucabangeni okweqile: «kepha lo muntu osile angakhokhelwa kanjani ngaleyo software ... uma kuyisoftware ye-linux, bayahlanya gggrr"noma into enjalo.
Mayelana nokuba sezimpini zeGnome VS KDE nezinto ezinjalo, isizathu sokuthi kungani ngibamba iqhaza (noma ngikholelwa) kaningi kulokhu kulula. Uma ngifunda umbono womsebenzisi we-X futhi ngibona ukuthi akuyona inhloso, into efana nale: «i-archlinux ingudoti, angizange ngiyisebenzise kepha imfucumfucu yayo, ubuntu yiyona ehamba phambili»Noma«i-debian nayo ayiyona engcono kunazo zonke, okungcono kakhulu yi-ubuntu ngoba iyona enabasebenzisi abaningi"Noma into efana naleyo ... ngikholwe, ngingazama kodwa angikwazi ukuhlala ngaphandle kokuphawula. Inkinga yami ayikho kwi-distro (kumacala angama-99%), kepha kumsebenzisi. Ngikunika isibonelo, izinga futhi ngokwami ​​ngiyazi ukuthi unjiniyela osemthethweni we-Debian kanye nesikhulu se-Ubuntu futhi, lo mfana usebenzisa Ubuntu ... ucabanga izinga Noma ngiyamgxeka ngokusebenzisa Ubuntu? Wozani, hhayi ukudlala. Kungani kungenjalo? Yebo, ngoba ungumuntu ohlakaniphe ngokwedlulele, UQONDE KAKHULU, uyazi ukuthi angaba yini nenjongo futhi isinqumo sakhe sizokwenziwa ngolwazi lwamanye ama-distros amaningi, engizama ukukusho ukuthi usebenzisa Ubuntu ngoba efuna, hhayi ngoba ukungazi amanye ama-distros.
Ngigxeka abasebenzisi abathi umkhiqizo we-X (kungaba yi-distro, imvelo, njll.) Ungcono kunomunye noma okunye, lapho bengazi nokuthi lokho noma lokho kuphumula ngokujulile.
Ukubingelela futhi empeleni, okuthunyelwe okuhle kakhulu
PS: usuyifundile le? https://blog.desdelinux.net/todo-en-gnulinux-tiene-que-ser-gratis/
Okungajabulisa ukukhuluma nge-GNU / Linux, kepha hhayi ngenkululeko, kepha kungenjalo (angifuni ukusho ubugqila, kepha into efana naleyo)
Ngiyalazi igama: dependency
I-athikili enhle kakhulu, njengakho konke okwenzile 🙂 Ngokwalokho engikubonayo, ngingomunye walabo abangalandeli ngokuqinile isoftware yamahhala, ngihlala nginomnikazi noma omunye umnikazi, ngoba iqiniso ukuthi ngisebenzisa i-GNU / Linux kuphela ngoba ngithola kuyathakazelisa, kwehlukile, ngaphezulu ukuthi umdlalo wokuzilibazisa usuyindlela yami yokuphila. Njalo lapho ngibuyela kuWindows, ngiphuthelwa yiLinux, ngoba iWindows (angikuthandi ukusebenzisa i- $ ekugcineni), ayizizwa ifana. Angithandi ukugxeka i-OS, ngoba ngiyazi ukuthi wonke umuntu unelungelo lokusebenzisa noma yini ayifunayo.
Ngiyayidinga nje ukuthi isebenze, angifuni ukuthi ibe namaphakeji wamahhala kuphela, ngifuna isheshe, kepha ihle njalo. Ngithole kuphela ukuthi lapha, ngingaba neyodwa ngokushesha noma yinhle ngendlela engifuna ngayo.
Ngalesi sizathu, wonke umuntu osebenzisa izinhlelo / izindawo azidingayo, ngoba lokho kungenye yezindlela. Ukube besifana, umhlaba ubungaba nesithukuthezi kakhulu.
Angimsoli u- "The Archer" ngokufuna ukubuyela kuWindows, angizomgxeka, uma nje engazizwa ekhululekile, noma ngabe uzame kangakanani, ayikho enye indlela.
Sanibonani, ngiyaphinda, isihloko esibucayi uTina! Ubukeka njengembongi (? XD
Ngizobhala la mazwana ngizama ukubukeka ngihlanya 😛
Ngifunde kudala ukuthi ukuheha kweLinux kuyinselelo yezobuchwephesha elethwa yiqiniso lansuku zonke lokwenza "x" kuLinux (njengokwenza ichweba le-HDMI ukudonsa / ukusebenza) okulethayo, ukusebenza nokusebenza okuthile esikudlula kwamanye ama-OS kumane nje kuhlanganiswa.
Abantu (futhi le yingxenye ezwakala iyinqaba) sithambekele ekuxhumaneni nomphakathi ngaphezu kwemvelo ngenxa yesidingo sokungazizwa sisodwa (kuyiqiniso, akekho ofuna ukuba yedwa, akekho umuntu…), The iqiniso lokulwa nabanye abantu nokufuna ukuphoqa ukushushiswa kwethu kusibandakanya ekuvivinyweni okusenza sizizwe "siyingxenye yomshini", kukhulisa ukuzazisa kwethu futhi kusinike induduzo.
Bengihlale ngincoma ukuthi imiphakathi ekhululekile ikhiqiza kanjani imfoloko yohlelo lokusebenza olungu- "x" okunqunyelwe ukufa, akukho okuphoqayo, bakwenza ngokwemvelo futhi ngibonile nokuthi abavumelani kanjani ngemininingwane engabalulekile "x", ngemuva kokufika ekumiseni ukuthuthukiswa kwephrojekthi.
Kepha ekugcineni, abantu abanqoba lezi zithiyo, abagcini nje ngokukhula njengososayensi bamakhompyutha (noma yisiphi isihloko abafuna ukubanika) kepha futhi bayakhula esimeni sabo njengengxenye yomuntu yomphakathi.
Okwamanje kuyinkinga, ngiyakhumbula ukuthi uLinus torvald wathi usebenze ngeposi kuphela, lutho umuntu kumuntu, ngoba uma kungenjalo bekungeke kusebenze kahle. Mhlawumbe kufanele sibuyele kulokho! hehehe imikhonzo!
Abantu (futhi le yingxenye ezwakala iyinqaba) sithambekele ekuxhumaneni nomphakathi ngaphezu kwemvelo ngenxa yesidingo sokungazizwa sisodwa (kuliqiniso, akekho umuntu ofuna ukuba yedwa, akekho….)
Kimi, inkinga yesoftware yamahhala iqale lapho kuvela amalebula. Esikhundleni sokuba nesistimu yokusebenza eyodwa ebizwa ngeLinux, kuningi okwenza into efanayo kakhulu. Esikhundleni sokuba nesicelo esibizwa ngokuthi "isoftware kuphela yokulalela umculo" kukhona uClementine, Banshee, Rithmbox, njll. Kuyafana nazo zonke izinhlelo, izindawo kanye ne-distros. Icala elibonisayo lelo le-Mint. Esikhundleni sokwakha uhlelo noma ingqikithi lapho ukubukeka kwe-Ubuntu kuguqulwa khona, kwathathwa isinqumo sokwenza i-distro 99% elingana nayo nenye imvelo yedeskithophu neminye imibala ekubukekeni.
I-Linux inezindlela ezimbili: ingaqhubeka ihlukane noma ihlangane. Ukuhlukaniswa kuzosho izingxoxo eziningi, ukuthuthukiswa kokusebenza okuncane (ngoba kuzoba namaqembu onjiniyela enza izinhlelo ezifanayo) nabasebenzisi abasha beLinux abambalwa, abazokwesaba imfuhlumfuhlu engaka. Ekupheleni kosuku, kuzoba kubi ngeLinux.
Ngakolunye uhlangothi, ngimelene nalabo abacabanga ukuthi ngokusebenzisa iWindows noma iMac OS abantu balahlekelwa yinkululeko yabo bese beba yizimboni ngaphandle kokuzimela. Benza nokukhetha kwabo. Ngaphakathi kwale mihlaba kukhona nabantu abangenakho ukuthanda okufanayo phakathi kwabo, futhi abakwazi ukwenza umehluko wabo ngaphandle kokuya kolunye uhlelo lokusebenza. Leyo yinto okumele siyicabangele.
JOEL ESPINOSA kusho
Kahle Buueeee…. !!! Okusha kuLinux, bekubonakala kuyindlela enhle yokufunda entweni ebengingayazi, ukubona ukuthi abantu abangemuva kwalokhu engikubona kwilaptop yami bahlakaniphe kakhulu kunami, kepha namanje angiqondi ukuthi bangaba matasa kanjani ngokubheka ngokungapheleli kokunye ukwabiwa, (uma uzama ukusiza ukukuthuthukisa), esikhundleni salokho khumbula bese uziqondisa kabusha kwifilosofi yangempela yalokhu ...! kwenze kwehluke… MAHHALA hhayi ukuthi MAHHALA, INKULULEKO INAMANANI… .kodwa ayikwazi ukuphakama njengoMthethosivivinywa nabangane bakhe bacabanga… Ngiyavumelana namaphakheji ayisisekelo, kodwa futhi nokuthi izinzuzo ezikhethekile kumele zibe nemizamo yazo yezomnotho… MAHHALA UKUYA LAPHO UFUNA khona, kodwa futhi ukhululekile ukungena kwezokuthutha ozifunayo noma ohamba ngezinyawo…. ukhokhelwe (mahhala) noma Mahhala (mahhala)… ..Ukukhishwa kwe-Queres Vos?
Phendula ku-JOEL ESPINOSA
Ngisanda kufunda i-athikili abayikhomba lapha, ngisebenzisana nomcibisholo, besinomphakathi ongasebenzanga phakathi kwabasebenzisi abane be-GNU / Linux, ngenxa yokusebenzelana kwami ​​naye ngikwazi ukukhuluma kahle nje, ungumuntu omkhulu njalo ku-canon yezinyawo esiza wonke umuntu.
Angikuboni kahle ukucacisa into ayibhalile, ngaphandle kokubheka konke aye wakunikela kuleyo blog, ngoba nje angivumelani nombono wakhe.
Masibe yimpucuko, singanikeza umbono wethu, kepha sihloniphe abanye nemibono yabo. UTeatcher usho izinto eziningi, ayikho i-q
Vele, lona umbono wami nje, uma ungawuthandi, weqe, kepha akudingeki ungithuke ngokuba nombono ohlukile, lokho kungubushiqela.
Hawu, ngithumele ngingaqedanga ukubhala.
Yebo, akubalulekile futhi.
I-PS- Indlela ukusabalalisa isoftware yamahhala, hhayi ukulwa phakathi kwabasebenzisi bayo.
Engikubonayo esikhundleni se-The Archer umuntu onqotshwe inkululeko. Ngerekhodi, lokhu ngikusho ngenhlonipho nangaphandle kwenhloso yokona.
Ngubani noma ngubani ongaphansi, sonke sizwile lolo hlobo lokukhungatheka luthatha izinqumo phakathi kokuhlukahluka okuningi ezweni le-Linux. Izikhathi eziningi kungenzeka ukuthi othile azizwe elahlekile, ekhungathekile inkululeko ephelele yokuzikhethela.
Cabanga ngengane esitolo esikhulu kunazo zonke futhi esihlukahlukene kakhulu se-jelly bean emhlabeni. Ungathini uma sithi kuye "Khetha ubhontshisi owodwa nje, noma yini oyifunayo, futhi izoba ngeyakho"? Kungathatha isikhathi eside ukuyikhetha kunokuyidla kamuva. Lokhu kwenzeka kithina ama-distrohoppers (sonke sigxume sisuka kwelinye i-distro laya kwelinye, okungenani isikhashana), sibheka i-distro ephelele futhi sikhathele ukuseshwa. Siyasesha futhi siseshe, kodwa ekugcineni sisele nesethu. Futhi sizohlala sinezimpukane ngemuva kwezindlebe zethu: ngabe kuzoba khona i-distro engikhonza kangcono kunalena engiyisebenzisa namuhla?
Okufanayo kungasetshenziswa ezindaweni zedeskithophu.
Kuyadingeka ukuthi uhlukanise uma ngabe ukhathele i-Linux, noma uma ngabe umane ukhathele ukwenza izinqumo, ukukhetha, ukuphenya, ukuhlola. Uma iLinux kuvela ukuthi ayiyona inkinga, isixazululo silula: Namathela kulokho onakho. Ungaphenyi isikhashana. Hlala ukhululekile uze uthole amandla noma ufuna ukuqhubeka uzame.
Kade ngangisebenzisa iXubuntu 11.04 uqobo futhi kufanele ngithi kulungile, kepha sonke siyazi ukuthi akuyona engcono kakhulu. Nginesifiso esesabekayo sokuzama ama-distros amasha, ukuchitha isikhathi, ukufunda i-Arch kusuka ezisekelweni, nezinye izinto eziningi ... Kepha njengoba ngisezivivinyweni ngokuqhubekayo futhi angikwazi ukunikela isikhathi esiningi ekuphumuleni, ngiyaneliseka. Iyangisebenzela futhi iyangisebenzela. Kungaba ngcono, kungakwandisa ukusebenza. Kepha kunginikeza insizakalo engiyidingayo, futhi lokho kulungile kimi.
Ngaphambi kokuthuthela kwi-Mac noma iWindows, ngincamela ukukhetha i-distro eningi (yingakho usizo kwizithangami) futhi ungangabazi engikukhethile, kepha zama ukuvumelanisa konke nezidingo zami. Ngemuva kwakho konke, yilokho labo abangenakho ukukhetha abangakwenza: ukuvumelanisa iMac noma iWindows (uma kungenzeka) nezidingo zabo.
Angazi noma abantu bazoyivuma yini le nto.
Ngemuva kokufunda okufakiwe kwasekuqaleni kuka-Archer, manje nombhalo kaTina, ngithi nje ukwahlukana kusazobe kukhona noma ngabe siyathanda noma cha. Njengoba kushiwo futhi ngabantu, wonke umuntu unendlela yakhe yokwenza izinto, yingakho ukwanda kwesoftware engaka ezinqolobaneni, ngakunye kwehlukile. Lolu hlelo luhamba ibanga elide kakhulu. Angicabangi ukuthi ubuciko noma inkululeko ivinjelwe ngokuba nezinketho ezahlukahlukene zento efanayo; Esikhundleni salokho, kubonakala kuyindlela engcono yokuthola impendulo nokuthuthukisa usuku nosuku, ngejubane elihehayo esinyathelweni esisodwa esihlala sikhona. Mhlawumbe yilokho abakubiza ngokuthi ukukhetha.
"Izimpi ezingcwele" zihlale zikhona futhi, kumane kusenze sibheke okwakudala kweGnome vs KDE, Ubuntu vs Debian, Vim vs Emacs. Funda imibono evela eminyakeni edlule bese ufunda eminye yakamuva, uzothola cishe into efanayo. Kungcono ukweqa kubo.
Ngokuqondene nabasebenzisi kanye nenkokhelo yokuhanjiswa, ngoba kusukela ekuqaleni akekho ongabaphoqa ukuba bakhokhe okuthile abangafuni ukukukhokha; noma ngabe ubona ukungabikho kokwesekwa kumaphrojekthi amaningi amile, ngakolunye uhlangothi bafuna kuphela ukufuna nokufuna ukusebenza. Kuyihlazo langempela ukuthi isoftware enjalo esebenzayo neyesikhathi eside ilahliwe ekukhohlakalweni ngenxa yokuntuleka kokwesekwa okuvela emphakathini wayo.
Ngicabanga ukuthi into enhle kakhulu ukuthi ungabi "nothando olukhulu" ngalezi zinkinga, ngokuphelele, ekugcineni wonke umuntu uzoqhubeka nokusebenzisa akwenzayo akuthandayo. Futhi bangaphakathi kwamalungelo abo, alula kanjalo.
Ngiqale ukusebenzisa iLinux ngo-Ephreli 2008, lapho Ubuntu bephuma noHardy Heron apenitas apenitas, konke lokhu kungenxa yokuthi iVista yavele yangqubuzana nokungasebenzi nokunginyathela ngesikrini esiluhlaza sokufa. Kwakumayelana nokuthi "ungafunda ukusebenzisa le nto, noma ufunda" futhi bekungukufunda kabusha izinto ebengizisebenzisa emawindini, kepha ngisebenzisa ngokukhululekile. Kusukela lapho angikaze ngishiye iLinux, ngoba esinye isizathu izindleko zokulayisense, ubaba wami wangibuka nje kabi ngosuku okwakuthiwa sizothenga ngalo idiski yokuqala yegciwane futhi wangisongela ngokunganginiki ipeni lezinhlelo ze-LOL. .. Esinye isizathu esihle sokuba kwiLinux. Futhi ngolunye usuku angazi ukuthi kanjani, kepha ngo-2009 ngazana neLinux Mint, ngezithembiso zokuza okulungiselelwe kangcono kune-Ubuntu, okwakuyiqiniso ngaleso sikhathi, kepha ngaphambi kokuthi ngichithe ukuhlola ama-distros amaningi, ngaze ngathatha isinqumo leyo mikhiqizo ye-Mint yanelisa izidingo zami.
Iyini indaba yami? Ngiyabona ukuthi, yize inkululeko iyigama elingaqondakali njengokuhle nokubi, kuyinto edingekayo. Mhlawumbe ngenxa yaleso sinqumo Umcibisheli uzolahlekelwa yithuba, hhayi lohlelo oluhle, kepha lokuhlangana nabantu abakhulu, udele umzamo wakhe wokukhuthaza isoftware yamahhala ukuze akhokhele amalayisense noma aqhekeze lokho akusebenzisayo ... Ngubani owaziyo, lokho bekuyisinqumo sakhe futhi bekhululekile ukwenza noma yini ayifunayo. Ngiyavuma ukuthi yize abasebenzisi behlukene phakathi njengoba kuphuma ama-distros amaningi, sinezidingo ezihlukile futhi ukusetshenziswa kweqembu ngalinye kuhlukile, futhi kulapho ingena khona incazelo yangempela yenkululeko, ukusebenzisa lokho okusifanele.
Yize, inhloso ukuthi iLinux ihlanganiswe ... Bekungeke yini kube kuwela ephutheni lamandla ayo ayimfihlo? Ngabe besingabulali iziphakamiso eziningi ezinhle, zokuthi noma ngabe benza okufanayo ku-x, yoz distro hhayi wonke umuntu angajabula? Lokho kwenzeka ngezinto eziyimfihlo ... Bafaka okuthile kuwe bese ubheka olunye uhlelo olwenza into efanayo, kepha oluthandayo futhi yilokho ...
Kimina kunzima ukukhetha uhlangothi, uma kungisebenzela, kabangiphoqi ukuthi ngikhokhe izindleko eziphezulu futhi kulula, kwamukelekile.
Halala, Tina. Yeka ukuthi kuhle kanjani ukukufunda futhi! Ngiyakukhumbula. Ngiyethemba ukuthi uqhubeka ubhala kusuka ku-Linux kaningi. Sanibonani.
Ngiyakuqonda okushoyo, kepha kimina kubonakala sengathi ukubonakaliswa kungadlulela ekuziphatheni komuntu ngokujwayelekile nasekuqedeni intuthuko ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe kanye nezokuxhumana; ngokudabukisayo sesikude sodwa.
Cishe sisesigabeni soguquko futhi kumayelana nokuzivumelanisa nezinguquko, ngithemba ukuthi kuzoba njalo, kepha ithemba lami kwesinye isikhathi liyaphela lapho ngibona ukuthi ezizukulwaneni ezintsha inkinga iya ngokuya iba yimbi kakhulu, umkhuba wokungabekezelelani nokucwaswa zihlala zikhuphuka njalo.
Ngiphinde ngafunda konke ukuphawula, okuningi kuthakazelisa kakhulu, kepha ikakhulukazi ngima kulesi sigaba samazwana ka- @ Wolf:
Angivumelani nawe kulokhu kuhlolwa. Ngikholelwa okuphambene, ngicabanga ukuthi ubuntu kufanele bunikelwe ekuphishekeleni okuhle okuhlangene.
Uxolo, isigaba engikhulume ngaso yilesi esilandelayo:
kepha ubumbano nobumbano kwesinye isikhathi kudinga ukuzidela kobuntu, inkinga eza kuqala kimi.
Yimibono emibili evumelana ngokuphelele. Ngikhetha imiphakathi emincane lapho lowo muntu, yize egcina amakhodi ajwayelekile futhi ehlonipha abanye, angenza futhi ahlehlise ngokuthanda kwakhe - ngangokunokwenzeka. Angizithandi izifundazwe eziphakathi, futhi angiyithandi imiphakathi lapho imibono eyehlukene yenqatshwa ngaphandle kwesithunzi sokungabaza.
Akekho ophikayo ukuthi kuyadingeka ukufaka isandla kokuhle okuhlanganyelwe, kepha kukuphi lokho okuhle okuhlangene? Qaphela, ubunye nokulunga okuhlangene yizinto ezihluke kakhulu. Umlando wesintu ukhuluma ngobumbano lokulwa izimpi ezingcwele, ezomnotho noma ulaka oluhlukahlukene, hhayi ukwenza ngcono isimo sabalambile, abashaywa ngamandla. Kukhona ngisho ubunye ekungeneni, ububi obukhulu besikhathi sethu.
Yingakho ngithanda ukuzimela ngenhlonipho kunobumbano "lobubi obujwayelekile", okwenziwa njengamanje. Ngaphandle kwalokho, ngizoba owokuqala ukuzidela ngenxa yokuhle kakhulu, kodwa ngemuva kweminyaka eminingi yokubuka nokucabangisisa, ngiyakungabaza kakhulu ukuthi isintu siyakwazi ukwenza into enjalo.
Kepha okubi kakhulu, nabasebenzisi beLinux uqobo banomehluko phakathi kwabo.
Iphutha, abasebenzisi abanokungezwani yibo ubuntoos, yibo abaphonsela abanye ama-distros inhlamba futhi bathuka abasebenzisi babo.
Ngicabanga imiqondo libertad y isisa badideka kaningi kakhulu, ngeshwa okwazisa abaningi kabi ngokuqukethwe isoftware yamahhala.
Makungabikho muntu onokungabaza: inkululeko Kunezindleko. Abanye abathuthukisi bakhokhelwa ukwenza isoftware yamahhala, abanye bathwala izindleko ngezinsizakusebenza zabo, kanti abanye bafuna ukuxhaswa ngeminikelo noma ngezinsizakalo, kepha izindleko zingokoqobo, noma ngabe kungokwesikhathi nomzamo osetshenzisiwe.
Abasebenzisi abaningi be-software yezentengiso (ngokuvamile ephathelene) baqala ukusebenzisa isoftware yamahhala benombono wokuthi bazohlala bethola impendulo kuzo zonke izidingo abangazidinga mahhala, okungelona iqiniso ngempela. Kodwa-ke, labo abeza kwi-software yamahhala benesimo sengqondo sokufunda, ukuzama, nokuzuza kulwazi oluqoqiwe ngeke badumazeke.
Nsuku zonke kunabasebenzisi abaningi abasebenzisa i-Linux, i-FreeBSD nezinye izinhlelo zokusebenza zamahhala ngenxa yekhwalithi nokuthembeka abakutholayo, kodwa bambalwa ababona ukuthi le mfanelo ingumphumela wenkululeko evumela ukusebenzisa nokutadisha izinhlelo zokusebenza ezakhiwe ezinye nokwenza ngcono.nemisebenzi ethathwe kokunye. Isoftware yamahhala ngombono wami ikhuthaza ukuncintisana okunempilo, ngoba ivumela ukuthi ibambe iqhaza futhi ibe yingxenye yokwenziwa ngcono kwesicelo, noma ithathe ikhodi esivele ikhona, iyimfoloko futhi yenze olunye uhlelo lokusebenza olungaphakama kunolokuqala futhi ekugcineni uyisuse., njll.
Impela abanye bazocabanga ukuthi emhlabeni wesoftware ephathelene nomncintiswano onamandla kakhulu usamile, futhi basalungile, kepha kuyenzeka ukuthi kulokhu labo abaphumelelayo abakwenzi njalo ngokunikela ngomkhiqizo osezingeni eliphakeme, ngoba kunezici eziningi ekudlaleni, okungahlanzekile ngaso sonke isikhathi.
Ukunikeza isibonelo esisodwa nje:
Abanye bazokhumbula iWindows NT 4, "ugogo" weWindows XP. IMicrosoft yenze inguqulo yoMsebenzi kanye ne-Server. Amanye amasevisi awanakufakwa kunguqulo ye-Workstation (umkhawulo wangamabomu), futhi umehluko wentengo phakathi kwalezi zinguqulo ezimbili wawungafakwanga kahle. AbakwaMicrosoft bathi lokhu kungenxa yokuthi inguqulo yeServer ibilungiselelwe ngokukhethekile, kuze kube yilapho umsebenzisi esebenzisana ngokuqhathanisa kwalezi zinhlelo zombili bese ethola ukuthi okuwukuphela "kokusebenza" okukhona kwakuwukungena okulula kwerejista. IMicrosoft izabalaze ukuphika lelo qiniso kuze kube yilapho umsebenzisi eshicilela uhlelo lokusebenza olwenzile ngempumelelo ukuguqula inguqulo ye-Workstation ibe yiSeva mahhala. Yonke imali izinkampani ezikhokhele lolu hlelo okuthiwa lwenziwe kahle ayizange isetshenziselwe ukukhiqiza ukuthuthuka kwezobuchwepheshe, kepha ikakhulukazi ukwandisa amaphakethe abambalwa. Ngamanye amazwi, babekhwabanisiwe.
Manje ake siqhathanise le ndlela naleyo ye-pfSense (ukusatshalaliswa kwamahhala nokuvulekile okuzosetshenziswa njenge-firewall): i-pfSense ivumela abasebenzisi bayo ukuthi banikele ngempango ngokusebenza abakufunayo, kepha lokho akukho okwamanje. Uma abanye bekuthola ukusebenza okunjalo kujabulisa, banikela ngempango, njalonjalo kuze kube yilapho impango ifinyelela isamba esithile esithandekayo ngokwanele. Ekugcineni oyedwa noma ngaphezulu wohlelo bathuthukisa ukusebenza futhi bathathe impango, kususwe iphesenti elincane elithathwa yiphrojekthi ukuzisekela. Ekugcineni, ukusebenza kuvame ukwakhelwa enguqulweni elandelayo ye-pfSense yenzuzo (yamahhala) yabanye. Umphumela? Wonke umuntu uyanqoba, ngendlela eqotho.
Ukusebenza esikhungweni sokucwaninga kwezenhlalo kungifundise ukuthi ngingazethembi kakhulu lezi zinhlolovo, ngoba imiphumela incike kakhulu endleleni ezilungiselelwe ngayo ikakhulukazi kwisampula labantu elenziwa ngalo.
Abanye bethu bahlala emazweni ampofu futhi abanayo imali eyanele yokukhokhela isoftware, kepha uma sikwenzile, sithi $ 15 ngehora, mhlawumbe iningi lethu lingavuma ukunikela njalo ngemali ukuxhasa iphrojekthi ethile yamahhala esithandayo. . Le yindlela amanye amaphrojekthi athakazelisayo futhi aphumelelayo agcinwa ngayo, njengeLinux Mint, ngokwesibonelo.
Kimi ukwehluka kwesoftware yamahhala kuyinto enhle kunokuba kube yisici. Ngendlela, angazi ngawe, kepha kuyangixaka ukuthi abanye abasebenzisi beWindows bathi ukwehlukahlukana kokuhanjiswa yiphutha elikhulu leLinux, kepha nokho abakhonondi ngokuhlukahluka okukhulu nokusabalalisa (okungukuthi, okungekho phakathi) kwezinhlelo zokusebenza zeWindows ezikhona.
Ukubuyela esihlokweni: izingxoxo phakathi kwabasekeli bephrojekthi eyodwa yamahhala zingakhathala ngempela uma umuntu ezibuka ngaphandle kokuqonda. Ngakolunye uhlangothi, ngibathola bethakazelisa ngokwedlulele, ngoba lapho kushisa izingxoxo kuvame ukukhishwa ukuthi kwezinye izimo kungabekelwa. Uma umuntu ekwazi ukushaya indiva intukuthelo nokuzithoba, bese ethatha kuphela izinto ezihlosiwe kanye nezimpendulo ezinqunyiwe ezibangelwa yilokhu kugxekwa, umuntu angathola umqondo omuhle wamandla nobuthakathaka bamaphrojekthi ahlukahlukene.
Ngakolunye uhlangothi, kusobala ukuthi abasunguli bephrojekthi banethonya elikhulu lapho bethatha isinqumo sokuthi iphrojekthi izothatha ini, kepha uma isoftware yamahhala inokuthile okuhle, kungukuthi uma ukuqondiswa kungathandwa inombolo eyanele Unentshisekelo futhi abantu abasebenza kanzima bangayifaka ikhodi bese benza iphrojekthi entsha ethatha inkomba oyifunayo, njengoba kwenzekile neLibreOffice, ukuthatha isibonelo esaziwa kakhulu.
Ngakho-ke yize ngibona ukuthi umsebenzi wesoftware yamahhala ungahle uhlelwe kangcono (ngokwesibonelo, ngicabanga ukuthi umsebenzi omningi kufanele wenziwe ekuguquleni amazinga), angicabangi ukuthi izinto zimbi kakhulu, futhi isampula yalokhu ukuthi iningi labasebenzisi be-supercomputer abanamandla kakhulu emhlabeni basebenzisa izinhlelo zokusebenza mahhala (futhi kufanele kukhunjulwe ukuthi ezimweni ezinjalo imali akuyona into enqumayo, ngoba sikhuluma ngehadiwe ebiza izigidi eziningi).
Uxolo ngobude bamazwana, kepha ngicabanga ukuthi lolu daba lumaphakathi.
+1000000 ... namanye amaqanda amaningi ..
Ngibhalisela izimpikiswano zakho, Hugo. Ngifunde imibono eminingi kuyo yonke i-Intanethi futhi, ngikholwe, ngikunikeza udumo.
Kuyinjabulo yangempela ukukufunda, mfana.
I-athikili enhle kakhulu, ngiyithande kakhulu.
Okuthunyelwe kokuqala ungangishicileli kimi ngiyacela, ngalekhibhodi yezingcingo ngibhale i-imeyili ayilungile.
I-athikili enhle, kepha angihambisani nalokho umngani akwenzile ukushiya ifulegi engikulwela kakhulu, okungukuthi ukuvumelana nabanye nokuthi wehlulekile.
Isoftware yamahhala iyaqondakala, futhi ngikuLinux kuphela ngokungabi semthunzini onemifantu, ama-serial tricks, ama-keygenes nezimagqabhagqaba ukugwema ubuqiniso, okuyinto uqobo engicabanga ukuthi lo mkhuba ukukhuthaza "ubugebengu". sikhuluma ngokuphepha noma ukwethembeka uma nginezinhlelo "zokuphanga" emshinini wami? Manje angiyena unjiniyela wezinhlelo, angizange ngifunde noma yini ehlobene nesayensi yamakhompiyutha, inkambu yami iyimpilo, futhi ngenhlanhla ngithole iWine ukwenza lezo zinhlelo ezenzelwe i-W futhi engizikhokhela zona. Ngithanda ukuphenya, ukuphenya, ukuhlola, futhi ungikholwe ukuthi uma benginombono oyingxenye wendlela yokwenza isoftware, bengizosiza isoftware yamahhala ikhule; Kepha njengoba ngingenakukwazi ukunikela ngolwazi, ngenza imithombo yami engikutholayo ukuxhasa laba basebenzi abazinikele ngokuzidela.
phila ukhululekile, ufe kahle
Isoftware yamahhala nenkululeko ayikhathali lapho wazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani ngaphandle kokushiseka ngokweqile. Akukho sikhathi lapho bengingashiya khona i-SL ngoba ingcono ezicini eziningi. Labo abafuna ukuzama izindawo eziningi nama-distros amaningi bakhathele ukuwusebenzisa, ongazizuzeli wona.
I-EasyTAG: hlela umculo wakho ngempumelelo
Iziphakamiso zami (Impendulo) ku-Choqok